Sinocare dia nanatrika ny MEDICAL FAIR THAILAND 2019-News-Sinocare
Nanatrika ny MEDICAL FAIR THAILAND 2019 i Sinocare
Fotoana: 2019-09-13 Hits: 210
Nanomboka tamin'ny 11-13 sept, 2019, dia vita soa aman-tsara tao Thailand Bangkok ny andiany faha-9 an'ny MEDICAL FAIR THAILAND.
MEDICAL FAIR THAILAND dia notanterahin'i Messe Düsseldorf Asia (MDA), miaraka amin'ny tantaram-pahamendrehana efa hatramin'ny 2003, izay mitombo hatrany amin'ny tanjaka ka hatramin'ny fampirantiana lehibe indrindra sy iraisampirenena indrindra an'ny indostrian'ny fitsaboana sy ny fitsaboana. Ity no hetsika laharana faha-1 an'ny Thailand ho an'ny indostrian'ny fitsaboana sy fahasalamana.
"Avy amin'ny mpanentana mankany amin'ny manam-pahaizana." Amin'ny maha lisitra voalohany mpanamboatra glucose amin'ny ra ao Shina, ny Sinocare dia manome rafi-pitiliana glucose azo ampiasaina amin'ny fomba marina, mora vidy ary tsotra ampiasaina, ireo vokatra ireo dia noraisin'ireo mpantsaka rehetra manerana an'i Shina, miaraka amin'ny 50% ny tena diabeta. -manara-maso ny mponina mampiasa vokatra Sinocare.
Ny fananana rafitra fanaraha-maso glucose amin'ny glucose ao anaty ihany no dingana voalohany. Sambany izahay nanatrika ny Medical Fair tany Thailand, tamin'ity hetsika ity, nitondra ihany koa ny rafitra fanaraha-maso marobe (glucose amin'ny ra - asidra urika; glucose amin'ny ketone); HbA1c Analyzer; ACR Analyzer (creatinine; MAU) sns.
Nandritra ny hetsika dia naneho fankasitrahana lehibe ny vokatra ny mpanjifanay.
Amin'ny alàlan'ny fitiavana, manatsara ny kalitaon'ny fiainana ho an'ireo marary diabeta sy aretina mitaiza hafa isika.
Pejy mialoha: Nitsidika ny Sinocare Inc. ny tompon'andraikitra amin'ny fitsaboana sy fahasalamana panameana.
Pejy manaraka: Fihaonambe mpivarotra Sinocare voalohany natao soa aman-tsara tany Delhi